EJU Exam Practice Class တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသူများစာရင်းကြေငြာခြင်း။
OJEC ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် MAJA EJU Exam Prepartion Classes ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွင့်လှစ် သွားပါမည်။
EJU Result ထုတ်ယူရန်အတွက် အသိပေးကြေငြာခြင်း။
EJU Seminar ကို စိတ်ပါဝင်စားကြသည့်အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Online Seminar for EJU
ဂျပန်တက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ (Examination for Japanese University Entrance) EJU၊ EJU စာမေးပွဲမှ ရရှိနိုင်သော အခွင့်အလမ်းများ၊ စာပမးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်သည့်သင်တန်းနှင့် ပတ်သက်သော ဆွေးနွေးပွဲကို အောက်ပါအတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
EJU စာမေးပွဲအတွက် သင်တန်း (သင်တန်းကြေး အခမဲ့) EJUအတန်း တက်ရောက်ဖို့ စာရင်းသွင်းနိုင်ပါပြီ
EJU 2021 1st session exam result မ်ား ထုတ်ယူရန် အကြောင်းကြားခြင်း
၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် EJU စာမေးပွဲ လျှောက်လွှာ လက်ခံခြင်း
EJU နှင့် EJU စာမေးပွဲမှ ရရှိနိုင်သော အခွင့်အလမ်းများနှင့် ပတ်သက်သော ဆွေးနွေးပွဲကို MAJA နှင့် OJEIC တို့ပူးပေါင်းပြီးအောက်ပါအတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
2021 ခုနှစ်6လပိုင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် EJU စာမေးပွဲနှင့်ပတ်သတ်၍ အသိပေးကြေငြာခြင်း။
EJU 2020 2nd session exam result များရောက်ရှိခြင်း။
The announcement of Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) 2020.
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လ ၂၁ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) တွင်ကျင်းပပြု လုပ်မည့် [ EJU ] Examination for Japanese University Admission for International Students စာမေးပွဲ ရပ်ဆိုင်း ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာခြင်း။
EJU 1st session exam result များရောက်ရှိခြင်း။
16.6.2019 တွင် ဖြေဆိုထားသော EJU 1st session exam result များ MAJA Head Office တွင်ရောက်ရှိနေ ပြီဖြစ်ပါသောကြောင့် အောက်ပါ လိပ်စာအတိုင်း လာရောက်ထုတ် ယူနိုင်ပါသည်။
Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) 2019.
EJU 2019 1st Session *************************** Date of Exam: >>> June 16, 2019(Sunday) Application Period in Yangon & Mandalay >>>12.2.2019 to 8.3.2019 Application Venue: Yangon >>> MAJA Education Centre No. 66(A), Thura St, 9Ward , S/Okkalarp
An announcement of Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) 2018.
(1) 2021 DECEMBER တွင် ဖြေဆိုထားသော JLPT Exam Online Result ယနေ့ မြန်မာ စံတော်ချိန် 7:30 am မှ စတင်ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (2) Japanese Literature Translation Contest 2022 အတွက် လျှောက်လွှာလက်ခံကာလမှာ ၁၃.၁.၂၀၂၂ မှ ၃၁.၁.၂၀၂၂ အထိဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာတင်ရန် အချိန် (၁) ပတ် သာကျန်ပါတော့သည်။
visitors : 88,733